Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Klaas-Jan Huntelaar Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Hunter".
Anyị Klaas-Jan Huntelaar Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Dutch Goalscoring Machine gụnyere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ụdị ihe mgbaru ọsọ ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Klaas-Jan Huntelaar nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Klaas-Jan Huntelaar - Nwatakịrị na Ezinụụlọ:
Klaas-Jan Huntelaar mụrụ na 12th nke August 1983 na Voor-Drempt, Netherlands.
Ọ bụ nwa nke abụọ a mụrụ nye nne ya, Maud Huntelaar na nna ya, Dirk-Jan Huntelaar.
Huntelaar dị nanị afọ isii mgbe ezinụlọ ya si n'obodo a mụrụ ya na Voor-Dremptto kwaga n'otu obodo a na-akpọ Hummelo.
Ọ bụ n'obodo nta ahụ ka Huntelaar tolitere na nwanne ya nwoke nke okenye bụ Niek na nwanne ya nwoke bụ Jelle.
Ndị nne na nna Dutch gbara ndị na-eto eto Dutch ume ịkwalite ịhụnanya ya maka football, ọkachasị nne ya nke na-enweghị mmasị na bọlbụ mana ọ kwenyere na ụmụ ya sonyere n'egwuregwu ahụ bara uru.
N'oge na-adịghị anya, Huntelaar debara aha ya na VV H. en K. tinyere ụmụnne ya. N'okwu ya;
“Akụkọ m malitere na H&K, ebe m na-eche na m ga-enweta ihe mgbaru ọsọ na ịbụ pro. Ọ malitere site na nraranye ”
Oge a na-eme ka ọrụ ịkwalite nkà nke football bụ onye nna ya kwuru na ya nwere nkà site na nwata.
"Ọ gara klọb mpaghara mgbe ọ dị afọ ise, ị ga-ahụ ozugbo na o nwere amamihe,"
Chetara nna ya Dirk-Jan na 2012.
Klaas-Jan Huntelaar Biography - Bulọ ọrụ Buildup:
Huntelaar mepụtara talent ya nke football na VV H. en K. nke dị na mpaghara maka afọ 6, na-egosipụta mmemme nlebara anya nke ndị na-egwu si De Graafschap na-enye ya nkwekọrịta mbụ ya mgbe ọ bụ agadi 11.
Mgbe na De Graafschap, Huntelaar kwadoro onwe ya dị ka onye na-aga n'ihu mgbe a nwara ya n'ọtụtụ ọnọdụ dịka nchekwa, etiti, nku, na ọbụna dị ka onye na-eche nche!.
N'oge na-adịghị anya, Huntelaar bịara bụrụ onye a ma ama dị ka ihe mgbaru ọsọ na-atụ egwu iji nweta ihe mgbaru ọsọ 33 na egwuregwu 20 maka ndị ntorobịa nke klọb ahụ n'oge oge 1997-98.
Klaas-Jan Huntelaar Biography - Tozọ Na-ewu ewu:
Ka Huntelaar na-aga n'ihu na mkpọsa ya na-enweghị nhụjuanya n'ụdị, yabụ klọb ndị na-efe ụgbọ elu na-agbanwe oge iji nweta akara aka ya.
Malite na PSV ebe Huntelaar na-enweghị ike igbochi masịrị ya n'oge mbụ ya site na ịlele ihe mgbaru ọsọ 26 na egwuregwu 23 maka ndị ntorobịa klọb.
Ihe ngosi a nke hụkwara Huntelaar ka ọ bụrụ onye nchịkọta egwuregwu kachasị mma mere ka ya na ndị otu egwuregwu nke klọb nwee ebe ọ na-eme ọkachamara mbụ ya na 3-0 merie RBC Roosendaal na 2002. E mechara gbazinye 19 afọ ahụ n'oge ahụ. na klọb dị iche iche.
Klaas-Jan Huntelaar Biography - Bilie Iji Mara Aha:
Nke mbụ bụ De Graafschap ebe Huntelaar mere nkwụghachi azụ. Otú ọ dị, ọ gbapụtara onwe ya na ìgwè nke abụọ, AGOVV (na ego) ebe ọ gụchara dị ka onye kasị elu nke nchịkọta.
Na-egosipụta nkwenye nke dị oke mma ịbụ eziokwu, Huntelaar na njedebe nke ego ya na AGOVV tụgharịrị ohere ịbanye na nkwekọrịta ọzọ ya na "nna ukwu ego" PSV.
Kama ịkwaga na Heerenveen nke Frisia ebe o meriri ihe mgbaru ọsọ 17 na 31 ọkụ ma nyere ya aka iru eru maka 2005-06 UEFA cup.
"Onye na - achụ nta ahụ" onye na - abụghị onye ga - efunahụ ụdị ọfụma, nọrọ n'elu egwuregwu ya mgbe oge na - esote, n'ihi nke a, ọtụtụ klọb chọtara ya gụnyere Ajax nke nwetara akara ngosi goolu maka 9 nde Euro na 2006. Ndị ọzọ , dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Maddy Schoolderman Klaas-Jan Huntelaar Storyhụnanya Akụkọ:
Huntelaar nwere mmekọrịta ya na enyi nwanyị ya ogologo oge bụ Maddy Schoolderman ruo ihe dị ka afọ iri abụọ.
Birmụ ịhụnanya ndị malitere ịlụ dị ka ndị nọ n'afọ iri na ụma zutere n'oge agụmakwụkwọ ha na Rietveld ebe ha kụrụ mkpụrụ nke ịhụnanya toro na mmekọrịta zuru oke.
Ọsọ dị ngwa rue ụbọchị ha na-alụghị di ma ọ bụ nwunye mana ha enweela ụmụaka abụọ. Nwa mbụ ha bụ nwa nwoke aha ya bụ Seb. A mụrụ ya na 9th nke Eprel 2009.
A mụrụ nwa ha nke abụọ bụ Alex na 20th nke July 2011. Tụkwasị na ndepụta ahụ bụ nwa nwanyị Puck (a mụrụ 6 August 2013) yana nwa nwoke Jim (a mụrụ 2 Jenụwarị 2017).
N'ikwu okwu banyere mkpebi ya ịghara ịlụ di ma ọ bụ nwunye, Huntelaar na-ekwu na:
“Abụghị m onye ọdịnala. Ọ na-adị m ka m alụọla di, na-enweghịkwa agbamakwụkwọ. ”
Klaas-Jan Huntelaar Ndụ Ezinụlọ:
A mụrụ Huntelaar na ezinụlọ nke ndị òtù 5. anyị na-ewetara gị nkọwa gbasara ezinụlọ ya.
Banyere Nna Huntelaar: Dirk-Jan Huntelaar bụ nna nke goolu na-eme nke ọma na onye nwere mmasị n'ịgba bọọlụ.
O nyeere ụmụ ya aka nkwado dị ukwuu ma na-eje ozi dị ka onye ọkwọ ụgbọala ya gburugburu obodo. Mgbe a jụrụ ya na 2012 maka ihe kpatara ọ ji achụ nwa ya nwoke dị afọ 29, Dirk-Jan ji ịtọ ọchị zaghachi na:
N'ihi na ọ ka m mma ịkwọ ụgbọala! ”
Nke ahụ bụ ma akụkụ nke Kdị mmadụ Dirk-Jan. Mgbe Huntelaar kwagara Real Madrid, nna na-atọ ọchị nke 3 nabatara site n'aka onye nta akụkọ na-amaghị ihe nke chọrọ ịma otú ndị nne na nna Dutch si nweta ozi banyere ụmụ ha na-aga n'akụkụ Spanish.
Dirk-Jan onye maara nke ọma na onye nta akụkọ ahụ amaghị ihe ọ na-agwa otu nne na nna Huntelaar zara:
"Amaghị m. Anụbeghịkwa m na ndị nne na nna Huntelaar".
Banyere mama Huntelaar: Nne Huntelaar bụ Maud bụ naanị onye otu ezinụlọ nwere mmasị n’egwuregwu bọọlụ.
Ihe ọdịmma ya dị na ya eserese, omenala na ụmụ anụmanụ. Ka o sina dị, ọ na-akwado ụmụ ya na-egwu egwuregwu.
Banyere Hmụnna Huntelaar: Hmụnne Huntelaar bụ Niek na Jelle. Niek bụ ọkpara nke ụmụnne. E jidere ya ozugbo na 2016 mgbe egwuregwu kpụ ọkụ n'ọnụ n'etiti akụkụ Huntelaar, Schalke na Dortmund.
Ihe mere eji jide ya bụ na ebubo ndị ọ na-atụ na ya nkume megide Fans nke Dortmund mgbe egwuregwu.
N'aka nke ọzọ bụ Nwa nwanne nwoke Huntelaar bụ Jelle. Onye nke kacha nta n'ime ezinụlọ ahụ dị ka Huntelaar na ndị mmadụ na-agbagwoju ya anya maka onye na-egwu egwu.
Otú ọ dị, Jelle na-eme ka ọ bụrụ ọrụ nke ịgwa ndị mmadụ banyere onye ọ bụ n'ezie.
“M na-ekwu eziokwu mgbe niile na abụghị m Klaas-Jan, mana ka m na-achọta ndị mmadụ, ọ dị mma ịse foto, ana m eme nke ahụ".
Banyere ndị ikwu Huntelaar: akpụ akpụ pụọ na ezinụlọ ndị ezinụlọ Huntelaar mmekọrịta gụnyere nwanne nna ya Hans, nwanne mama Hetty, ụmụnne nwanne Nico na Hendrik nakwa dị ka Nikki.
Klaas-Jan Huntelaar Bio - Ihe kpatara Aha otutu:
Huntelaar amara aha ya ogologo oge "Dinta", kemgbe 2004.
N'ezie, ndị Fans nke klọb ya bụ SC Heerenveen kwụgidere nnukwu akwụkwọ mmado onye kacha baa goolu na egbe n'aka ya.
Otú ọ dị, Huntelaar enweghị nsogbu na nick ka ọ na-akọwa ihe kpatara ya n'usoro ndị a:
Enwere m mmasị na "Hunter". Ọ bụ aha m nwere ike ịmata ya. A sị ka e kwuwe, m na-achọ mgbe niile ịchọrọ na ịchọta ihe mgbaru ọsọ.
Klaas-Jan Huntelaar Ndụ Nke Onwe:
Huntelaar bụ onye udo na onye na-achọ nkwekọ bụ onye kachasị ihe niile na-eme ka okwu nchedo nke mbọ ya sie ike. O zuru ezu ịsị na ọ nakweere ụkpụrụ nduzi nke ndụ Oliver Kahn:
Gaba, na-aga !.
Mgbe Huntelaar anọghị na egwuregwu, ya na ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya na-akpakọrịta ma n'oge pụrụ iche soro ụmụnne ya ma ọ bụ nwunye ya na ụmụ ya mara ụlọikwuu.
Ọ bụ ezie na Huntelaar enwetawo ịdị ukwuu n'ịrụ ọrụ ya, ọ na-ahapụ ọtụtụ ihe a ga-eche banyere ya site n'igosi ọnọdụ nzuzo dị oke mkpa.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ akwụkwọ Klaas-Jan Huntelaar Akụkọ nke a na-agbakwụnyeghị eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.